Akhriso:- Tirada Magacyada Liiska Shaqaalaha Dekada Berbera Loo Qaatay Iyo Kuwa Shaqadii Laga eryey + Sawirkii Waraaqahaasi | Saxil News Network
Akhriso:- Tirada Magacyada Liiska Shaqaalaha Dekada Berbera Loo Qaatay Iyo Kuwa Shaqadii Laga eryey + Sawirkii Waraaqahaasi
Berbera (Saxilnews) Wararka naga soo gaadhaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa sheegaya in la eryay shaqaale dhan 270 , iyada oo shaqaalaha ka hawl gali jiray dekada ay dhamaayeen 800.
Arrintan ayaa imaaneysa in ka dib markii laba cisho ka hor ay qaateen xaqoodii saaka la soo dhajiyay shaqaalah inta la qaatay iyo inta la eryay.
Waraaqo ayaa lagu soo dhajiyay saaka mina subaxdii hore albaabka laga galo dekada, waxaana waraaqdaa ku qoraa liiska dadka la qatay ee ka hawl gali doona dekada.
Waxaana warqadan dusha kaga qoreyd cidii iska weyda liiskan la soo dhajiyay ka mid maaha shaqaala weynaha cusub ee dekada Barbara.
Ilaa hadana maamulka dekada iyo shaqaalaha la eryey midina kamuu hadal sababta keentay in shaqaale intaas le’eg mar qudha la eryo oo shaqada laga caydhiyo.
Dhawaan ayay aheyd markii wasiiro ka tirsan xukuumada talada dalka heysa ay booqday xarunta dekada Berbera, islamarkaana ay shaqaalaha u sheegeen in mudadii ay shaqeynayeen xaqoodi loogu shubey baanka dhexe ee magaalada Barbara.
Wasiirka madaxtooyada Somaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo warbaahinta la hadlayay isla maalin kaasi ayaa sheegay inaanu jirin qof shaqo waayi doona oo ka tirsan shaqaalaha dekada Berbera “Ma jirto cid shaqo waayi doonta, 1-da bisha ayaananu wareejinaynaa”